Nhau - Zvakanaka here kushandisa barb inopera pasimbi yakarukwa PTFE hose
Zvakanaka here kushandisa barb ends pasimbi yakarukwa PTFE hose
Vanhu vanogona kubvunza kana zvakanaka kusungira simbi yakarukwa PTFE pombi yemafuta pabhabhu inokwana kumagumo ine yakajairwa hose clamp mu low pressure carb fuel system.
Vanhu vangangoda kushandura simbi dzese dzakarukwa mafuta hose ane PTFE avo, uye vane barb fitting inopera nzvimbo mbiri, uye vachidzungaira kuti zvichashanda here?
PTFE isarudzo yakanakisa yemasisitimu emafuta asi iwe unofanirwa kushandisa inogona kushandiswazve kana crimped AN fittings. Iwe unogona kutarisa pazasi makomendi eaya marudzi maviri emafittings anopera:
1, The PTFE reusable rotating hose end iri nyore kuisa uye mushandisi ane hushamwari, iyo inoshandisa maviri-chikamu system kuchengetedza hose panzvimbo. Iine dhizaini yakakosha yekumanikidza, inogona kushandiswa zvakare pasina kukuvadza chibatanidza, uye iyo yakasungwa dhizaini yedhizaini inogona kudzivirira kukanganisa kune yemukati chubhu. The PTFE hose connectorinosungirirwa pamuchina paPTFE hose core kuti ipe chisimbiso chikuru chinobvira, uye simbi isina tsvina yekunze ndiro inosungirirwa yakaparadzana kuti iwane hose hose inobata simba. Iwo anorema zvishoma, asi anoti ane yakachengeteka hose clamping nzira pane kusunda kukiya.
2, Crimped pombi fittings inowanzo shandiswa muzvivakwa. Ivo vanovaka akawanda hoses nekuti inoda hydraulic press uye chaiyo mold kuti inyatso crimp collar kusvika kumagumo ehose. Michina iyi uye mould zvinowanzo kudhura, saka hauzooni vanhu kana zvikepe zvidiki zvichizvishandisa. Iyo crimped hose inoda kuti crimp collar itsva ishandiswezve, asi inoonekwa seyakasimba uye yakavimbika chishongedzo kana yakachekwa nemazvo.
Besteflon zvinhusimbi isina simbi yakarukwa PTFE hosi dzehuturu dzine zvinogonekazve AN zvinogumira, kana crimped fittings inopera mumasaizi akajairika eAN6, AN8, AN10. Chero kubvunza kana mibvunzo nezve izvi, zvakasununguka bata timu yedu yekutengesa pa sales02@zx-ptfe.com
dema ptfe hose yeindasitiri yemotokari
Nguva yekutumira: Nov-06-2021
Mabhureki: Cunifer mapaipi kana SS PTFE hoses? |...
AN zvigadziriso / mitsetse: Mhinduro inodiwa kubva ku ...
ptfe yakavharwa hose, ptfe hose, Ptfe Tube Melting Point, Convoluted Ptfe Hose - 939/939b, ptfe yakarukwa hose, 6an Ptfe Hose Assembly,